यसकारण श्रावण महिनामा कपाल काट्नु हुँदैन - aajakoparibesh
यसकारण श्रावण महिनामा कपाल काट्नु हुँदैन
आजको परिबेश Wednesday, July 22nd, 2020
काठमाडौँ। साउन महिना सुरुभएयता कपाल काट्न हुन्न भन्ने मान्यता छ । केही युवाहरुले यसलाई मान्दैन । तर, पाका पुस्ताले भने यसलाई मान्छन् । उनीहरु सकेसम्म साउन महिनामा कपाल नकाट्दा उचित हुुने तर्क राख्छन् ।
शास्त्रीय मान्यताअनुसार साउनभरि भगवान विष्णु आफ्नो कुटीमा आराम गर्न बस्छन् । उनी आराम गर्न बसेको बेला कपाल काट्न हुँदैन । कपाल काट्ने कार्य शुभकर्म भएकाले पनि भगवान विष्णु सुतेका बेला शुभकर्म गर्न नहुने मान्यता रहेको पाइन्छ।
‘शास्त्रीय परम्पराअनुसार विष्णुको अनुपस्थितिमा कपाल काट्न हुँदैन,’ यो महिनामा विष्णुको भजन, कृतन गर्ने र हरियो लगाउने परम्परा छ, यो महिनामा कपाल काट्दा बिरामी परिन्छ भन्ने परम्परा छ ।’ पौराणिक मान्यताअनुसार कपाल काट्न हुने र नहुने दिन पनि फरक–फरक छन् । आइतबार कपाल खौरिँदा एक महिना आयु घट्न सक्ने, मंगलबार काट्दा आठ महिना आयु घट्ने र शनिबार काट्दा एक वर्ष आयु घट्ने मान्यता छ ।
त्यस्तै, सोमबार कपाल काट्दा सात महिना आयु बढ्ने, बुधबार पाँच महिना बढ्ने, बिहीबार कपाल काट्दा १० महिना र शुक्रबारः ११ महिना आयु बढ्ने मान्यता रहिआएको छ।
हात जोडेर नमस्कार गर्ने सँस्कार‌को बैज्ञानिक कारण‌ जान्नुहोस्!!!
गोहीसङ्ग सुत्न नदिएको रिसमा श्रीमानसङ्ग डिभोर्स
यो हो बाहुनको नाक चुच्चो हुनुको कारण!!!!
यस्तो समुदाय जहाँ ज्वाइँँलाइ २१ वटा सर्प दाइजो दिनैपर्छ
हाम्रो वरपरका १० अनौठा सत्यहरु
गाइको पिसाबमा सुनको मात्रा पाइने एक अध्ययनको निष्कर्ष